Mamalan-kira indray VANF : Fofompofony ihany, potipotiny koa
Raha tany Amerika ry Mahaleo, tsy ho ireto olon-tsotra fantatsika hatramin’ny 1972 ireto. Raha ny laza amin’ny firenena misy azy avy, ry Beatles, Johnny Halliday ary Michael Jackson, no azo hanoharana azy.
Fa mampihetsi-po ny fitiavan’ny olona ny Mahaleo. Feno hipoka ny Lapan’ny Kolontsaina omaly raha hanao veloma farany an’i Fafah. Raha vita ny «Isekely» nataon’i Dama, tehaka sy hoby miredona. Toa hoe faly anefa tsapa fa malahelo. Ary rehefa tena hanainga ny razana, nitsangana tahaka ny olona iray ireo olona marobe. Nentanim-po nihira ny «Veloma, Veloma, Veloma fa izaho tsy afaka hitana…Miandry any am-pasana, ilay toerana»…
Ny «Barea» farany teo no nahavita nampitempo fo iray ny Gasy an-tapitrisa. Ny hira tsy kitra, saingy na izany aza, manainga mavesatra ihany koa ry Mahaleo amin’ny sehatra misy azy.
Hatramin’ny 1972, efa 47 taona izany izao ry Mahaleo no «mampirevy» : raiamandreny, zanaka, zafy. Hatramin’ny 1960, niverenan’ny Fahaleovantena, tsy misy na mpanao politika iray aza manana «fofompofony, potipotiny» amin’izao fitiavan’ny olona ny tarika Mahaleo izao.
Mila mandini-tena ihany. Olon-tsotra ry Mahaleo : Gasy sahala amin’ny Gasy, tsy mba nangala-pihinana ny volam-bahoaka, tsy mba nanao kobaka am-bava. Hira no balan’ny fananarany, «revy» zaraina no mba jadony. Laro tsotra ihany dia ampy hahamamy hoditra.
Tourisme – Difficile inventaire du patrimoine de l’État
Événement – Le Salon « Voatra » revient